Myanmar Website Email Hosting Web Hosting Service Cheap
Contact: 097 305 1324
delivered by Media Smart
Web Hosting ၀ယ်လိုပါသလား
အလွန်ဈေးသက်တာတဲ့ WEBHOSTING ကိုသင့်ရဲ့ စီးပွား ရေး လုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ WebSite တစ်ခု ပြုလုပ်ဖို့ စီစဉ်ပေးနေပါတယ်။
Buy this plan now » View detail services »
WordPress/Joomla Site လုပ်လိုပါသလား
သင့်ရဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကို နာရီပိုင်း အတွင်း Internet မှာ တင်လိုရင် မြန်မာငွေ ငွေကျပ် ၂ သောင်း လောက်နဲ့ လုပ် နိုင်အောင် စီစဉ် ပေးနေပါတယ်။
Check this plan now » View detail services »
Website ဒီဇိုင်း လုပ်လိုပါသလား
စိတ်တိုင်းကျ website design ပြုလုပ်လိုပါသလား။ ကျပ် ၁ သိန်း လောက်နဲ့ ဒီဇိုင်း တွေကို ပြုလုပ်ပေး ပါတယ်။
1 free hosting (1 year)
1 free maintenance (1 year)
1 free mailboxes (1 year)
Website Design နဲ့ website site hosting များကို မြန်မာငွေ ကျပ် ၁သိန်း ကျော်ခန့် ဖြင့် အထူး ဈေးနှုံး များဖြင့် ရောင်းချ ပေးပါတယ်။ဈေးနှုံးများ ကြည့်ရန်
best for small startups/developers
1 ( WordPress/Joomla [CMS] Site )
cPanel Domain Control
Full Control over WordPress/Joomla site
Free Weekly Backup နှင့် Server Monitoring
10 Email Accounts (POP/IMAP, WebMail)
cPanel Domain Control Panel
Free Web-based File Manager
10 Free Sub-Domains ရပါမည်
WebSite/Hosting + WebDesign
1 Free Website Hosting (WordPress/Joomla/Html)
1 Database if WordPress/Joomla Design
1 Free Email Accounts (POP/IMAP, WebMail)
1 GB Free Disk Space for Joomla/WordPress
1 Year Free site maintenance
သင်လိုချင်တဲ့ specs ရှာမရ/မရှိ ဖြစ်နေပါသလား၊ No problem!
Credit Card နဲ့ ငွေပေးချေ ဖို့ အဆင် မပြေဖြစ် နေပါသလား။ ကျွန်တော်တို့ ရုံးခန်း (Media Smart, အမှတ် ၂၀၇၊ ၃၇ လမ်း ကျောက်တံတားမြို့နယ် )တို့ လာရောက် ငွေပေးချေ နိုင်ပါတယ်။
မြန်ဆန်ပြီး ဈေးနှုံး အလွန်သက်သာတဲ့ Web Hosting Package များ
GoldenMyanmarHost မှ web hosting များ သည် MySql Database နှင့် PHP server language များနှင့် configure ပြုလုပ်ထားပြီး FTP မှတဆင့် code များ ကို upload လုပ်နိုင်ပါသည်။ Server hosting များကို GoldenMyanmarHost ပညာရှင်များမှ ထိမ်းသိမ်း ပေးပြီး နေ့စဉ် လည်း backup ပြုလုပ်ပေးထား သောကြောင့် အရေး ကြုံလာပါက အချက် အလက် data များ မပျောက် ပျက် ပြန်လည် ရရှိနိုင်ပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့၏ စည်းပွားရေး လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက် အလိုက် Server စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရွေးချယ် ၀ယ်ယူနိုင်သောကြောင့် မလိုလား အပ်သော ကုန်ကြစားရိပ်များကို ရှောင်ရှားနိုင်ကာ၊ ဈေးနှုံး အလွန်သက်တာစွာ ၀ယ်ယူနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးထားပါသည်။ Web Developer များ အနေနှင့်လည်း အသင့် install လုပ်ပြီးသား WordPress sites များကို ဈေးအသင်သာ ဆုံး ၀ယ်ယူကာ မိမိတို့ရဲ့ Customers များရဲ့ လုိုအပ်ချက် အလိုက် လိုအပ်တလို မွမ်းမံကာ customized website ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
လူကြီးမင်း ၏လုပ်ငန်း အတွက် Email နှင့် Web Application များပြုလုပ်ရန် လိုပါက စွမ်းဆောင်ရည် ပိုမြင့်သည့် Web Server Hosting Package ကို ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။ Web Server Hosting တွင် website အများအပြား တည်ဆောက် နိုင်ပြီး Database လည်း တစ်ခုနှင့် အထက် တည်ဆောက်နိုင်ပါသည်။ Email Server လည်းပါဝင်ပြီး Email များကို POP/IMAP ဖြင့် မိမိ ၏ဖုန်း နှင့် Computer တွင် လည်း တပ်ဆင်နိုင် ရုံမက Web Browser မှလည်း တိုက်ရိုက် ဖတ်ရှု့နိုင်ရန် ပြုလုပ်ထား ပေးပါသည်။ လူကြီးမင့်၏ လုပ်ငန်းရှိ ၀န်ထမ်း တစ်ဦးချင်းစီအား Email Account တစ်ခုစီ ပေးနိုင်ပြီး Package ထဲတွင် အခမဲ့ ပါဝင် ပါသည်။
GoldenMyanmarHost ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များမှ WebServer နှင့် Data များကို နေ့စဉ် Backup ပြုလုပ်ပေးပြီး အချက်အလက် ပျောက်ဆုံးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း။ Server Maintenance အား မှန်မှန် ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် WebSites များ မြန်ဆန်စွာ အလုပ်လုပ်စေခြင်း။
GoldenMyanmarHost ၏ Web Server များ အား ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များမှ အချိန်မှန် စစ်ဆေး ခြင်းဖြင့် မလိုလား အပ်သော Server Downtime အား ကာကွယ်ပေးထား သောကြောင့် 99% သော အချိန်တိုင်း ပုံမှန် အလုပ်လုပ် နေခြင်း။
GoldenMyanmarHost ၏ customer များမှ အခက်အခဲ ကြုံလာပါက ၂၄ နာရီပတ်လုံး အကူအညီပေး ဖြေရှင်းပေးခြင်း။
Golden Myanmar Host
Golden Myanmar Host provide products and services with affordable value. Let us know your requirements, we will give you better deal.
(မြန်မာ) 097 305 1324
(Australia) +61 423717097
© Copyright 2017. Golden Myanmar Host / Media Smart web hosting service and design.